मिस नेपाल खतिवडा आज पोखरामा, उर्जा ल्याब एक सामाजिक उद्यम - Parichay Network
मिस नेपाल खतिवडा आज पोखरामा, उर्जा ल्याब एक सामाजिक उद्यम
सन्तोष बस्याल द्वारा	 २५ असार २०७६, बुधबार ०९:१८ मा प्रकाशित
पोखरा । मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ कि विजेता श्रृङखला खतिवडा पोखरामा छिन् । उनि आज आयोजना हुने मोटिभेस्नल सेमीनारका लागि पोखरा आएकी हुन् । पोखराको जिरो कि.मीमा अवस्थित गोल्डेन हाउस पार्टी प्यालेसमा पूर्वान्ह १० बजेबाट सुरु हुने कार्यक्रममा श्रृङखलाले आफ्नो जिवनमा आएका उताडचढाव सँगै नारी शसक्तिकरणका विषयमा बोल्ने आयोजक उर्जा ल्याबले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रवेश निशुल्क छ । खतिवडाले ब्युटी प्याजेन कार्यक्रममा पनि अहिलेका युवतीहरुले कसरी सहभागिता जनाउन सक्छन् त्यस विषयमा पनि आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नेछिन् । उनले आफुले ब्युटी प्याजेनहरुमा सहभागी हुँदा भोग्नु परेका समस्या सँगै सफलताको कथालाई प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रमको नाम “पोखरा वि एसपायर टु इन्सपाएर” राखिएको छ । युवाहरुमा बढदै गएको वितृष्णालाई कम गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको आयोजकको दाबी छ । अब युवाले गर्ने दायित्व के त ? के सधै युवा विदेशिनेनै हो ? आफ्नै देशमा पनि सक्षम भएर कसरी बाच्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल पनि गरिने छ ।
उर्जा ल्याब एक सामाजिक उद्यम हो ।कर्पोरेट हाउस हरुको सिएसआर पार्टनरको रुपमा नारी शसक्तिकरण, युथ शसक्तिकरण, सुचनाको हक, सामाजिक उत्तरदायित्व,दिगो विकासका लक्ष्यहरु, प्रविधि पर्यटनका विषयमा यस्ले काम गर्दै आइरहेको छ । २ वर्ष अघि ल्याबका अध्यक्ष विवेक सापकोटाको पहलमा उक्त सँस्थाको स्थापना भयो । उनि र उनको एक जना साथी मिलेर सँस्थाको स्थापना गरे ।सापकोटा अमेरिकी दुतावास युवा परिषद्मा रहेर युवा पर्यटनको क्षेत्रमा समेत काम गरिसकेका छन् । उनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको संघिय युवा सांसद पनि भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
पोखरा पर्यटन क्षेत्र । विवेकलाई लाग्यो पोखरामा पनि अब युवालाई जगाउनुपर्छ । नारीहरुको हक, अधिकारका विषयमा आवाज बुलन्द गराउनुपर्छ । अत्याधिक पर्यटक भित्राउन पहिले त यहाँका युवाहरु उद्यमी बन्न जरुरी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि स्वदेशमै केही गर्ने सीपको विकास गर्ने हेतुले पनि उक्त सँस्था खोलिएको उनले बताए । “पहिले त यो सँस्था खोल्दा हामी आफैलाई सक्षम गर्नका लागि खोलेका थियौ”, उनले भने, “अहिले हाम्रो लक्ष्य समाजका हर नागरिकको सोचमा परिवर्तन ल्याउने भएको छ ।”
नागरिकबाट आफु र आफ्नो सँस्थाले राम्रो साथ पाएको उनले बताए । उर्जा ल्याब सरकारी, गैरसरकारी वा प्राइभेट सेक्टरका हर कोही सँग पनि मिलेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो । सँस्थाले पोखराको जिरो कि.मी बाट आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।